Ngaba uyazi ezininzi zeekati ezixhamla ngentshiseko kwisikhwama esithwala izilwanyana? Kubonakala kungekhona. Kwaye oku kunenkcazelo yayo. Ingxowa-ithwala abanikazi ukuba bafumane kwiimeko ezininzi ukwenzela ukuba babeke iqabane labo lezilwanyana kwiklinikhi yezilwanyana. Kulapho, ikati yasekhaya lifika kuluntu lwezilwanyana nabantu abangaqhelekanga. Izidalwa eziphilayo, iindlela zonyango kunye nokunakekelwa kweklinikhi zibukhali kwaye zivumba, zivumba, zivumba. Udokotela wezilwanyana akayi kuphona ithuba lokuthatha isilwanyana sakho. Uhlolisisa, uphononongo, iifowuni. Kwaye ngokuqhelekileyo uhlaba inaliti enobunzima, ebuhlungu emzimbeni wesilwanyana. Ikati ngokukhawuleza yakha umbutho: "Ukuthwala imithwalo yimbangela yokubandezeleka kwengqondo nangokwenyama, kufuneka wenze yonke into ebusweni bam, ukuze ungangeni kuwo." Ndiqhuba njani? Musa ukudonsa kuwo wonke umzi wezilwanyana ezibuhlungu, unxibelele ngesikhumba esinyeneyo. Le ndlela yokuthutha, mhlawumbi, iqinisekisa ubungqina bezandla zomnini kwaye ifike kwindawo ekuya kuyo, kodwa iyatshitshisa ngakumbi ikati elisetyenziselwa ukuhlala ekhaya. Ukuze udibanise ikati kwisikhwama esithwalayo kwaye ungabuyi indlela esuka ekhaya ukuya kwindawo esiya esihogweni kwisilwanyana kunye nomnini wayo kukho iindlela ezilula kunye nezilula ongazenzayo ekhaya ngexesha lakho lokuzimela.
Okokuqala, faka isikhwama sokuthwala, usibeke egumbini, uyivule uze ufake into ethile ngephunga lakho - ithawula okanye ihembe. Zama ukufumana indawo yengxowa kwindawo ethile ekuphumeni kwekati yakho. Kodwa kungekhona kwindawo ngokwayo. Ngaphandle koko, ikati iya kuqala ukuphepha indawo yokuhlala kwaye uqale ukukhangela i-rookery entsha. Ukuba awukwazi ukubeka ikati kufuphi neendawo zokuphumla, faka isikhwama sokuthwala kunye nendlela yelizilwanyana, umzekelo, kwindawo yokutya. Inzululwazi yemvelo iya kunqoba ukwesaba into entsha kwaye ikati iya kukhangeleka ngaphakathi. Ukwenza kube mnandi ngakumbi kuye ukuba afune ukuba yintoni efihla inxalenye entsha yendlu yakhe engazange ifundeke - efakwe kwisikhwama ukunyanga kumlingane omele. Musa nje ukubeka isikhwama kwikona elikude lobukho bakho okanye ukutyiwa. Ngaphandle koko, wonke umsebenzi uya kuhamba. Ukuxiliswa akuyona indlela efanelekileyo yokuphakamisa umxholo wokhuselo lwesilwanyana esisebenzayo.
Xa ikati ikhetha ukuqaphela isondela esikhwameni kwaye iyeka ukuyifunda, kwaye iyayiqonda, njengengxenye yendawo yangaphakathi, yenza indawo yokutya ngaphakathi kwesikhwama. Kukulungele ukubeka iplate kufuphi nodonga lwangemuva. Ikati, i-willy-nilly, iya kufuneka ilayishe ngokupheleleyo umzimba wayo kwisikhwama, kuba indlala ilumkile kwaye ilisola.
Emva kokuba ikati yakho iyeke ukuqonda ingxowa njengento eyoyikisayo kwaye iqale ngaphandle kokwesaba ukutya ukutya, ibekwe kufuphi nodongeni, zama ukumkhuthaza ukuba angene kuyo ngexesha elide kuyo, nangona kungenanto kwaye akukho ukutya kuyo. Vumela ikati ibe yinto ethambileyo kwaye ipholile kwipokethi. Kungcono, ukuba ngamanye amaxesha, ukuba ungene kuyo, uya kufumana isidlo esimnandi, ongeke umnike imihla ngemihla, kwaye uphawule ngamanye amaxesha. Ikati iya kuqala ukuqaphela isikhwama sokuthwala njengesifuba somlingo, apho ungadla kwaye ujabulele ukunakekelwa kwekati yakho yosuku.
Ukuphindaphinda kuyisiseko sengqondo yekethi yokuthwala iikhwama njengendawo ekhuselekileyo. Emva kokuba uzuze umphumo omuhle, ungashiyi isikhwama ixesha elide. Ngaphandle koko, ikati iya kululela kuyo kwaye iphinde iqalise ukuyika. Phinda uphinde uphinde usebenzise ezi zinto zilula kwaye kufinyeleleke kumntu ngamnye kunye nesilwanyana sakhe, kwaye uhambo lwakho oluya kwi-vet okanye kumtshakazi (umyeni) aluguquleli ukuya eKalvari.
Indlela yokulungisa indlu yangasese ngenja encinane
Ukubonakala kwekati endlwini: kutheni ukulungiselela?
Umbhali Lukyanenko uSergey Vasilievich
Izimpande zeCelery, iimpawu zonyango
Imithetho yokutya kunye ne-recipe ye-omelet ecocekileyo esuka e-Ekaterina Klimova
I-pike perch kwi-souff soufflé
Indlela yokufunda indlela yokugqoka kakuhle intombazana
Ukupheka, ukupheka inyama kwi-grill
Uhlobo ngokumelene nezifo: I-TOP-3 iimveliso ezilwa nokuvuvukala
Ukutya kunye ne-acidity eyandisiweyo yesisu
Isobho seklabishi esondayo kunye nama-mushroom